Luyaqhubeka uhlelo lokwakhiwa kwezindlu KwaPata | News24
Luyaqhubeka uhlelo lokwakhiwa kwezindlu KwaPata
KUGCINE kufikwe esivumelwaneni sokuthi luqhubeke uhlelo lokwakhiwa kwezindlu zemixhaso endaweni yaKwaPata emva kwezinxushunxushu ezibe khona ezinyangeni ezedlule.
Lokhu kuvele emhlanganweni ngeSonto mhla zingama-27 kuNhlaba (May), phakathi kwamalungu omphakathi azohlomula ngalezi zindlu, uMasipala uMsunduzi, uMnyango wezokuHlaliswa kwaBantu nenkampani eyakha lezi zindlu i-Fair Field.
Le nkampani ibisi nezinyanga ezine ingasebenzi njengoba yagcina ukusebenza ngenyanga kaMasingana (January).
Ukungasebenzi kwayo kudale izinkinga njengoba kwagcina ngokuthi kushaywe ikhansela lakulendawo uMnuz Nkosinathi Gambu kubangwa kona ukuma kwalolu hlelo.
I-Echo yangomhla ka-22 kuNdasa (March) yabika ngodaba lo mhlangano lapho kwashaywa khona ikhansela ngetshe emhlanganweni okwakuhloswe ngawo ukuba kudingidwe izinkinga ezibhekene nohlelo lokwakhiwa kwalezi zindlu.
Ikhansela lakule ndawo uMnuz Gambu ukuqinisekisile ukuthi kugcine kuvunyelwene ngokuthi uhlelo lokwakhiwa kwezindlu luzoqhubeka, kodwa wangaphumela obala ukuthi yiziphi izinkinga ebezibambile.
Uthe ukwakhiwa kwalezi zindlu bekumele kuqale ngoMsombuluko mhla zingama-28 kuNhlaba (May) njengo kwesivumelwano.
“Sibize umhlangano ngoba sifuna ukuzocacisela abantu ngalolu hlelo ukuthi ubani olwengamele. Kugcine kufikwe esivumelwaneni sokuthi aluqhubeke ukuze abantu bezohlomula kube nentuthuko kulendawo ngoba vele iyona into esiyifunayo. Siyakujabulela kakhulu ukuthi lolu hlelo seluzoqhubeka sasingafuni vele nasekuqaleni ukuthi kube khona into ezoluphazamisa kodwa kwaba khona-ke izinkinga ezincane.
“Kuzo hlomula abantu abangu-420 kulolu hlelo kodwa siphoxekile ukuthi iningi labo alizanga emhlanganweni ekubeni bebazi ukuthi basohlwini lwabantu abazohlomula. Abantu abafikile emhlanganweni bebengadlulile ngisho ku-150 asazi ukuthi bonke laba abanye bebeyephi ngoba kumele bayihambele le mihlangano ukuze bezokwazi ukuthi kwenzakalani ,” kubeka yena.
Amalungu alo mphakathi athi ajabulile kakhulu ukuthi sebezothola izindlu zabo ekade bazilinda.
“Bekusiphethe kabi ukuhamba kwenkontilaki eyakha izindlu ngoba besingazi noma isazobuya yini.Siyajabula kakhulu nathi ukubona intuthuko yenzeka endaweni yakithi. Kuzosizakala abantu abaningi ngalezi zindlu ikakhulukazi labo abazidinga ngempela,” kubeka elinye ilungu lomphakathi elingazidalulanga igama.
UMnuz Mandla Ngcobo uthe:
“Kuyasijabulisa singumphakathi ukuthi kube khona inqubekela phambili kwezentuthuko kulendawo. Siyathemba ukuthi akukho okuzovimba uhlelo. Luzoqhubeka luze luyophela,” kubeka yena.